Auto Belay Ngwaọrụ maka ịrị & Ntụrụndụ | Zuru okè rịgoro Systems
AKW DKWỌ AKWUKWỌ AKUKỌ DUXXX
Ntughari ugwo na-arụ ọrụ maka ịdabere na ogologo ndụ
PD® Athlete Sean McColl na-akọrọ akụkọ Olympic ya
Inweta ọkwa kachasị elu nke ule na asambodo
Kpoo onye ozo ohuru
Ịdị mma Dị elu.
Ọrụ dị elu.
Zuru okè ebe Auto Belays na-aka-wuru na USA na gbaara ka ndị kasị elu ọkọlọtọ na ụwa. Igosipụta aluminom na igwe anaghị agba nchara iji chebe nkenke dị elu dị n'ime. Ihe dị fechaa na nkwekọrịta kọmpụta, ntụkwasị obi, na ọnụ ala nke onye nwe ya bụ ole na ole n'ime ihe kpatara PD® ji bụrụ ezigbo ụgbọ ala na-arịgo mgbatị, ogige, ụlọ akwụkwọ na mahadum, na ninja ihe mgbochi, yana na ebe ntụrụndụ ezinụlọ. Nwalere ma kwado ya na 10x EN 341: 2011 Klaasị A., na-anọchite anya asambodo kachasị dị mkpa maka akụrụngwa egwuregwu belay.
Ihe di egwu.
Nwere ike ịdabere na
Nwalere na 10x EN 341: 2011 Klas A na-egosipụta aluminom na-adịgide adịgide na igwe anaghị agba nchara na mpụga na nkenke akwa-eyi mmiri dị n'ime.
Ntughari ohuru na-egosi PD® nanị Duplex Spring Design ered mere maka ntụkwasị obi na ogologo ndụ.
Ọ dị mfe ịrịgo, megharia ma jikwaa ịdị elu na ọnụ ala ụgbọ mmiri maka ọrụ na nzaghachị.
EGO NA-EGO NKWA
Ọnụ ego ntinye, ụgwọ nyocha akwụkwọ kwa afọ, enweghị ụgwọ ọrụ zoro ezo, na ihe ndị na-adịte aka na-apụta ego ego maka ndị nwe ha.
NA-AKA ỌRP Asọmpi
Ndị otu na ndị egwuregwu kachasị agba agba gburugburu ụwa ji ya na mbido ụgbọ ala mbụ eji asọmpi iko mba ụwa, na-eduga n'ọganiihu dị ịrịba ama n'ịsọ mpi na ịkwụwa aka ọtọ.
Ime ụlọ & n'èzí na-eji
Ihe na-eguzogide corrosion na ụlọ a kara akara maka arụmọrụ pụtara ìhè n'ime na n'èzí.
Iwuli igwe kacha mma
Họrọ ọrụ gị
Onye ndu onu ahia di elu na adighi nma.
Ntughari na nkezi nke 2ft (61cm) kwa nke abụọ, na-eme ka ọ bụrụ nhọrọ kwesịrị ekwesị maka ịrịgo izugbe, ụzọ ọkụ, ebe ndị na-arị elu ụmụaka, na ịrịgo ihe omume.
Egosipụta naanị Duplex Spring Design ™ mere maka ntụkwasị obi na ogologo ndụ.
Emechiri ya kpamkpam maka ime ụlọ na n'èzí.
Ọsọ ọsọ ™
Akpa ngwa ngwa ngwa ngwa na-ewepụta ụkpụrụ maka ogo na arụmọrụ.
Laghachi na ọkụ ọkụ 15ft (4.6m) kwa nke abụọ, Speed ​​Drive ™ dị mma maka ịrị elu ọsọ ọsọ na asọmpi, ụzọ dị ike, ọzụzụ etiti oge, yana ụzọ ahụike na sekit.
The Official Auto Belay nke IFSC World Cup ịrị na featuring anyị nanị Duplex mmiri Design ™.
Họrọ Lanyard gị
PD® Auto Belays na-enye atọ lanyard ogologo e mere na-ebuli gị na akpaaka belay arụmọrụ dabeere arịọnụ ugwu. Họrọ mgbe niile lanyard nke kachasị dabara adaba maka ịkwado elu ahụ site na nha nhata ma ọ bụ karịa karịa.
Elu arị elu n'etiti 18ft na 28.5ft (5.5m na 8.7m)
Elu arị elu n'etiti 26ft na 40.5ft (8m na 12.3m)
Elu arị elu n'etiti 34ft na 53.5ft (10.4m na 16.3m)
Họrọ Otu you Jikọọ
Ime ụlọ na-adịgide adịgide
Ngwunye ígwè, 3-ogbo auto-kpochidoro carabiner na swivel agbakwunyere
Mbibi na-eguzogide ọgwụ
Anodized aluminom, 3-ogbo auto-kpochidoro carabiner na ike swivel
Asọmpi na Nche
Abụọ, 3-ogbo akpaaka-kpochidoro carabiners na sewn nkịta ọkpụkpụ na ike swivel
Full ike sewn akaghị adabara iji na ikike njikọ iche
Ise Ogo Ogo
Ndị egwuregwu, ndị nwe ụlọ ahịa, na ndị na-arịgo ugwu hụrụ ya n'anya
Nnukwu ngwaahịa dị mma karịa otu nkwado
Akwa ngwaahịa ọbụna mma nkwado otu “Zuru okè ebe auto auto belays mgbe niile izute m mkpa na Arial Adventure mkpara ndidi na-enye aka na ọma asian mgbe ọ bụla m chọrọ ahịa nkwado.” Noah B. na 19 Ọgọstụ 2020
Noah B. na Aug 19, 2020
Izuzo zuru oke ga-eme ka agbụrụ gị zuo oke
Kachasị elu Ogologo Onwe Dị. Ukwuu nwere ike ikwu.
Mike L. na Mee 9th, 2019
Nchekwa onwe belay 2.0
Nke a bụ akpaaka belay nke ọdịnihu. Anyị hụrụ ngwaahịa a n'anya.
Kellen D. na June 19th, 2019
Nnukwu ojiji maka mgbatị ọ bụla!
Wonderfull ngwaọrụ eji ire ụtọ.
Maurice D. na Mee 6th, 2020
Na-arụ ọrụ dị ukwuu
Akpaaka akpaaka a bụ mgbidi ụkwụ 22 ma na-arụ ọrụ dị ukwuu. Ọ dịghị mkpa onye ọzọ igbu m! Ọ na-eche nke ọma na ntụkwasị obi ma dịkwa mfe ịtọlite ​​maka ebumnuche m. Azụrụ m onye nke abụọ maka akụkụ ọzọ nke mgbidi m!
Steve W. na Jenụwarị 28th, 2020
Nna-ukwu Gị Auto Belay Management Mmemme
Debanye aha gị
Ndebanye aha Ngwaahịa bụ akụkụ dị mkpa nke njikwa mbugharị akpaaka ma na-ewepụta ndekọ izizi na nke ziri ezi ejiri rụọ ọrụ niile nke ngwaọrụ ahụ. Buru onye mbu n’enye beta ihe di nkpa banyere mmelite ngwaahịa, akuko na ihe omuma, akwukwo oru, na onyinye di iche.
Akwụkwọ ntuziaka ndị ọrụ
Nweta anyị akwụkwọ ntuziaka na arụmọrụ nke Bekee na asụsụ mba ọzọ. Download kacha dị ugbu a akwụkwọ maka ihe nlereanya 220 na 230 na akpaaka belays, duplex mmiri ™ nnyocha na lanyard nnọchi akwụkwọ ntuziaka, nhicha na disinfecting ụkpụrụ nduzi, na ndị ọzọ.
Nweta ọtụtụ ihe na programmụ PD® gị na nkọwa doro anya ma miri emi banyere echichi, nlekọta na arụmọrụ. Nyochaa usoro nhazi nsogbu nkịtị, gụọ na nyocha nyocha ndị nrụpụta, ma chọpụta ụkpụrụ nduzi maka ijikwa belays akpaaka.
Standkpụrụ EN setịpụrụ mmanya maka nchekwa ngwaahịa, ntụkwasị obi na ịdị mma ngwaahịa. A na-anwale ma gosipụta akara ngosi zuru oke maka belays na-adịghị mma maka ntụrụndụ onwe ya na 10x EN 341: 2011 Class A. Lelee ma budata Nkwupụta nke Nkwekọ na Nnwale nke kachasị ugbu a.